Fara-fisoratana anarana ho an’ny Filankevitra GV/ Fanavaozana fisoratana anarana (17 Febroary 2021) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Febroary 2021 4:32 GMT
Ity ambany ity ny takelaka fangatahana sy fanavaozana ho an'ny fisoratana anarana ho filankevitry ny vondrom-piarahamonina GV. Raha mbola tsy nanao izany ianao dia manasa anao hamaky ny famaritana momba ny atao hoe Filankevitry ny Vondrom-piarahamonina alohan'ny handefasanao ilay takelaka hahazoana antoka fa azonao tsara izay olona voakasik'izany.
Ny fandraisana anjara betsaka avy amin'ny lafin'ny vondrom-piarahamonina no tanjon'ny nametrahana ny fepetra maha mpikambana. Afaka mandray anjara ny olona rehetra manana ny iray na maromaro amin'ireto sokajy manaraka ireto:
Ireo mpandray anjara izay ato anatin'ny vondrom-piarahamonina GV nandritra ny telo volana farafahakeliny, farafahakeliny manana fandraisana anjara miisa dimy, ary namoaka lahatsoratra na fandikan-teny tao anatin'ny dimy taona lasa.
Anisan'izany ireo mpandray anjara amin'ny fanentanana, ny lahatsoratra fiaraha-miasa toa ny Netizen Report, ary ny tetikasa famatsiam-bola madinika Rising Voices
Mpikambana mpitarika ao amin'ny ekipa, mpikambana ao amin'ny birao, lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny efitra famoaham-baovao, mpitantana ny fandikan-teny, ary mpandray anjara hafa.
Ireo mpandray anjara tsy miasa, ny tonian-dahatsoratra, ny mpitantana fandikan-teny, ny mpandray anjara sy ny mpikambana ato amin'ny vondrom-piarahamonina hafa izay nandray anjara tao anatin'ny dimy taona lasa dia ampirisihina ihany koa hisoratra anarana
Fisoratana anarana sy fanavaozana fisoratana anarana ho an'ny 2021:
Vakio ny fanambarana: Filànkevitra GV : Misokatra ny fisoratana anarana sy ny fanavaozana ho an'ny 2021![mg]
FARA-FISORATANA ANARANA: 17 Febroary 2021